March 16, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 16th, 2017'
Fanaanka Caanka ah ee Nimcaan Hilaac oo Lagu Xiray Dalka Suudaan (Dhagayso)
March 16, 2017 – Magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ayaa waxaa xalay lagu xiray Fanaanka caanka ah ee Nimcaan C/raxmaan “Nimcaan Hillaac” oo magaaladaasi u tagay inuu ku qabto bandhig faneed ay kala qayb galayeen dhallinyaro kale oo dalka Suudaan u dhashay. Fanaanka ayaa la soo xiray isagoo ku sugan Hool uu ka socday bandhig …
March 16, 2017 – Ra’iisul Wasaaraha cusub ee dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane, Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kulan la yeeshay shaqaalaha xafiiskiisa, wuxuuna shaqaalaha kala hadlay dar-dar gelinta howlaha horyaala Xukuumadda oo ay hormuud u yihiin shaqaalaha Xafiiskiisa. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu horeyn ka dhageystay warbixinno la xiriira xaaladda ay ku shaqeeyaan howl-wadeenada, ku …
Kulankii Khayre iyo Shaqaala Xafiiskiisa (VIDEO)
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu horeyn ka dhageystay warbixinno la xiriira xaaladda ay ku shaqeeyaan howl-wadeenada, ku xigeenka Xog-yaha Joogtada iyo Agaasimeyaasha Waaxaha xafiiska, waxana ay sheegeen inay la shaqeyn doonaan Ra’iisul Wasaaraha Cusub, si loo meel mariyo barnaamijyada uu Xukuumadda ku hoggaamin doono. Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono sidii …
Ciidamada Nabad Sugida Qaranka oo Xalay Toogasho ku Dilay Sarkaal ka Tirsanaa Ururka Al Shabaab (SAWIRRO)
March 16, 2017 – Ciidamada Nabad Sugida qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay xalay Magaalada Muqdisho ku toogteen nin la sheegay in uu ahaa sarkaal Ururka Al Shabaab ka tirsanaa, Kaasi oo si qarsoodi ahna kaga hawlgelayay Magaalada Muqdisho. Ciidamada Nabad Suggida ayaa saqdii dhexe ee xalay ku dhaqaaqay guri uu ninkaasi kaga sugnaa xaafadda Suuqa Xoolaha …